Meesha ugu fiican ee Dameerka lagu dhaqdo! | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Meesha ugu fiican ee Dameerka lagu dhaqdo!
Meesha ugu fiican ee Dameerka lagu dhaqdo!
Himilo — Halkan waxaa la dhihi karaa waa goobta qura ee dunida kamid ah ee aad looga weyneeyo laguna dabaal-dego wax ku oolnimada Gamaanka la rarto.
Kusoo dhawow tartanka Dameeraha oo halkan si joogto ah uga qabsoomaba gu’giiba marba. Waxaana sida idin muuqanaysa loogu diyaargaroobaa si weyn dabaal-degga iyo ka qeybgalka tartankan oo si kale marka loo dhigo qaabeeya nolosha dhaqandhaqaale ee magaala-xeebeedka Lamu ee Kenya.
Balse inta aan sii guda-galin tartanka, aan idin kaga sheekeyno waxa Dameeruhu uga dhigan yihiin dadka Lamu.
Mid kamid ah goobaha ay UNESCO u aqoonsatay tix-raacyada dhaqanka iyo xarunta dhaqanka Sawaaxiliga – Lamu.
Taariikhda Lamu waxay kasoo bilaabanaysaa 100 qarni kahor. Waxaana lamid ah dhaqashada Dameeraha. Waa magaaladii lagu dhisay xoogga Dameeraha. Waxaana halkan looga adeegsadaa gaadiidka kaliya. Waxaa lagu rartaa wax walba iyo xataa fuulidda.
Dhagaxyada guryaha lagu dhisto ayaa lagu qaadaa; iyo dhammaan dalagyada kasoo go’a beeraha waxaa suuqyada lagu keenaa Dameeraha.
Toban sano kahor tirada Dameeraha ku nool Lamu waxa lagu qiyaasay 2,000. Waana iska caadi in qoys walba oo guryaha ku heysto laba ilaa saddex Dameerood taas oo ka dhigan in 70% reeraha Lamu ay guriga ku heystaan Dameero.
Xarun lagu daryeelo Dameeraha ayaa ku taalla magaalada taas oo la dhisay sannadkii 1987-kii. 4 July ee sannadkaas oo ahayd maalintii la furay xarunta waxaa loogu yeeraa Maalinta Xurriyadda Dameeraha Lamu.
Xaaladda ay ku noolaayeen waagaas waxay ahayd mid aad u liidata. Weyd caato awgeed la golongolay oo feerahoodu tirsamaan. Tani waxay haweeney dalxiise ahayd ku qaaday dhismaha xaruntan si loo daryeelo Gamaanka la rarto.
Dameerlaydu markaas kaddib waxay bilaabeen inay nafleydooda ula dhaqmaan si fiican waxaana u bilaabatay nolol bedqabta oo ay ka heleen xanaanada mulkiilayaashooda. Dhalmadooda ayaana sare u kacday intaas kaddib. Xaruntani waxay caawimo weyn u ahayd dadka degaanka.
Si lacag la’aan ayay xaruntani ku daweysaa Dameeraha markay ka xanuunsadaan dadka leh. Waxaana ku sugan dhaqaatiir ku gaarowday dabiibkooda.
Badi waxaa yaalla hurgumooyinka ama dhaawacyo dhabarka ka muuqda oo aad u daran. Qaar uga yimid dagaal dhexdooda ah iyo mid loo geystay intaba.
Si dhaqanka Somaalida, Dameerahani waxaa ku dhigan sumad mid kasta lagu baadisooco oo lagu garan karo cidda milkiyadiisa iska leh.
Xamuulka iyo shaqada joogtada ah ee har iyo habeen loo adeegsado ayaa kamid ah dhibaatooyinka waaweyn ee laga diiwaangeliyo nolosha Dameeraha, waxaana muuqata isku dheelitirnaan la’aan xagga rarka iyo hunguriga la siiyo ah. Waxaana calaf loo siiyaa in aan u dhigmin inta jeer ee la adeegsado maalin walba. Tani waxay sababaysaa inay jir ahaan daciifaan.
Laakiin si kastaba, xaruntani karaankeeda waxay la tacaashaa wixii muuqan kara. Waxaana sannadkiiba laga daweeyaa xanuunnada caloosha
Xattaa waxaa loo dub-kiciyaa qoobabka si aysan uga qaadin xanuunno. Qaar kale oo Dameeraha kamid ah laakiin, waxay halkan ugu yeeraan gurigooda joogtada madaama kuwii dhalay aysan nooleyn. Balse durba marka ay gaaraan laba jir ayaa lagu simaa gacanta ninka iska leh lagamana qaado wax lacag ah.
Waxaana intaan soo sheegnay oo dhan barbar socda wacyi-gelin iyo la-talin ku aadan hab adeegsiga habboon ee Dameeraha oo la siiyo dadka dhaqda. Waxaana ay booqdaan dugsiyada wax-barashada si ay u gaarsiiyaan farriintaas. Carruurta yaryar ayaa la fahamsiiyaa xuquuqda uu leeyahay noolahan mayeeraanka ah ee maalin walba qeyb libaax leh ka qaata qurxinta iyo fududeynta danaha kala duwan noloshooda.
Marka aan usoo laabano tartanka, waxaa ka qeybgalaayaasha ay usoo xardhaan Dameerahooda si aysan kaliya ugu guuleysan midka ugu dheereeya xagga orodka balse sidoo kale kan ugu quruxda badan xagga muuqa.
Gamaanka la rarto wuxuu laf-dhabar aan sinnaba loogama maarmi Karin u yahay nolosha. Geedi-socodka taariikhduna waxay ifisay inuu yahay midka ugu wax ku oolsan inta la adeegsado. Laakiin waxaa muuqata in daryeelkiisa aan loo sinneyn balse loo kala dhow yahay. Shakina malahan in dadka Lamu ay yihiin kuwa ugu xanaanada iyo qaddarinta fiican Dameeraha ifka ku nool.
Ma qabtaa in Dameeraheenna sidaan oo kale tartan loogu qabto?!
Previous: Bayern Munichoo dooneysa weeraryahanka Federico Chiesa
Next: India: Wiil lagu qalay oo laga saaray 82 ilig oo dheeraad ah